पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् , २०७७ जेठ ०८ गते को राशिफल
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०९:३६ 157 0
बि.सं. २०७७ जेठ ०८ गते बिहीवार । इ.सं. 21 May 2020 । शक संवत १९४२ । नेपाल संवत ११४० बछलाथ्व । प्रमादी । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋृतु । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष । तिथि चतुर्दशी २१:५०:४४, उपरान्त: औंसी । नक्षत्र भरणी – २५:१९:१५, उपरान्त: कृत्तिका । योग सौभाग्य , उपरान्त : शोभन । करण विष्टि – ८:५७:२४, उपरान्त: शकुन – २१:५०:४४ । चन्द्रराशि मेष । आनन्दादी योग मृत्यु । दिनमान ३४ घडी २ पला । सूर्योदय ०५:०७ बजे । सूर्यास्त बेलुका ०६:४६ बजे ।
तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। तेस्रो व्यक्तिको हस्तक्षेपले तपाईं र तपाईंको प्रिय बीच तनाउ सिर्जना गर्नेछ। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ ।
तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। प्रेम असीम छ, प्रेम असीमित छ; तपाईंले अघि पनि यी कुराहरू सुनेको हुनुपर्छ। तर आज, तपाईंले यसलाई अनुभव गर्नुहुनेछ। आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन। विवाह पछि पाप उपासना हुन्छ, र तपाईंले आज धेरै उपासना गर्न सक्नु हुनेछ।
स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
आफ्नो उच्च आत्मिक शक्तिको बाबजुद तपाईं आज तपाईंसँग हुन सक्ने कसैको याद गर्नुहुनेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईंका नजिकैको कोइ अत्यधिक अप्रत्याशित मुडमा हुनेछ। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
आनन्दले भरिएको राम्रो दिन। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। पत्नीसँगको झगडाले मानसिक तनाउ उत्पन्न गर्न सक्छ। अनावश्यक तनाउ लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले बदल्न नसक्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सिक्नु जीवनमा एउटा ठूलो कुरा हो। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। मित्रहरू तपाईंले आशा गरेको भन्दा अझ सहयोगी हुनेछन्। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना लिनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। तपाईं लामो समयबाट श्रापित महसुस गर्नु हुँदै थियो भने, आज तपाईं आशिष पाएको महसुस गर्नु हुनेछ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ – तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आज प्रेमको मीठो चकलेटको स्वाद प्राप्त गर्नु हुनेछ। फाइदाजनक दिन – त्यसैले उँभो उठ्नुहोस् र अगाडि जानुहोस् किनभने राम्रो अवसरले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। आज तपाईंसँग शक्ति रहनेछ र आफ्नो कमाउने शक्ति कसरी जुटाउने भन्ने थाहा हुनेछ। आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
आफ्नो रोग बारे छलफल नगर्नुहोस्। रोगबाट ध्यान मोड्ने केही काममा आफूलाई संलग्न गर्नुहोस किनकि तपाईंले जति धेरै रोगको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त्यति नै बढेर जान्छ। मित्रहरूले तपाईंको राम्रो व्यक्तिगत जीवनको सन्दर्भमा सल्लाह प्रदान गर्नेछन्। निर्णयको बाटामा गर्वलाई आउन नदिनुहोस्। अधिनस्थहरूले भनेको पनि सुन्नुहोस्। तपाईंलाई र तपाईंको जोडीलाई साँच्चै नै आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि केही ठाउँ आवश्यक छ।
कोलेस्ट्रलको मात्रा धेर भएको आहार खानबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो दृष्टिकोणमा र कार्यालयको कामको गुणस्तरमा सुधारको अनुभव गर्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। तपाईंको सहयोगको आवश्यकता पर्ने साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। तपाईं आफ्नो समूह भित्र घुम्नुभयो भने विशेष कसैको आँखा फेला पार्नु हुनेछ। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४४४ पुग्यो
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गर्नुहोस,२०७७ जेठ १३ गते को तपाइको राशिफल
पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै ! हेर्नुहोस् ,२०७७ जेठ ११ गते को तपाइको राशिफल